अमेरिकामा रंगभेदको अन्तिम लड़ाई – Durbin Nepal News
जेष्ठ २१, २०७७ २:०४ मा प्रकाशित
तारा भट्टराई, न्युयोर्क
घट्ना २०१२ को हो, मेरो श्रीमानको क्यान्सर रोगको उपचार गर्न भारतको नयाँ दिल्ली स्थित गुणगाउँको मेदान्त अस्पतालमा बस्ने क्रममा मेरो पत्रकारिता कर्मबाट मासिक तलब वेष्टन युनियन मार्फत आउने गर्थ्यो । मैले काउन्टरमा गएर आफ्नो तलब रकम भारुमा बुझें । त्यहिं साँझ बाहिर रेष्टुरेण्टमा डिनर खान हामी निस्क्यौं । डिनर खाईसकेपछि बिल तिर्ने बेलामा एक हजारको नोट निकालेर दियौं । एकै छिन पछि मेनेजरले आएर यो नक्कली नोट हो पुलिस बोलाउंछु भन्यो । हामी निर्दाेष मानिस अब यति ठूलो शहरमा के हुने होला भन्ने लाग्यो । मेरो श्रीमानले यथार्थ कुरा बुझाएर अरु साथमा रहेको पैसाले बिल तिरेपछि हामी त्यहाँबाट फुत्केउं । नक्कली नोट साथमा छ भन्ने थाहा पाएपछि बाहिर निस्केर बाटोमा हिंडदा पनि डरलाग्यो । यसो हेर्दा सबै उस्तै देखिने नोटहरु कुन सक्कली कुन नक्कली छुट्याउनै गार्हाे भयो ।
अहिले अमेरिकाको मिनेशोटामा अश्वेत जातिका ४६ वर्षे युवक जर्ज फ्लोइडको घाँटिमा थिचेर श्वेत प्रहरी डेरेक चौविनले यातना दिएको भिंडियो जब जब हेर्छु अनि मलाई त्यही कुराको सम्झना आईरहन्छ । यदि त्यो दिन त्यो रेष्टुरेण्टको मेनेजरले पुलिस बोलाएको भए के हुन्थ्यो होला ? म वा मेरो बिरामी अन्डरलाईन मेडिकल कन्डिसनको श्रीमानलाई भारतीय प्रहरीले यस्तै घाँटी दबाएर मार्थ्यो ? वा पक्राउ गरेर सोधपुछ गरेर छोड्थ्यो ? वा नक्कली नोटको के कसुर र कानुन छ होला दिल्लीमा भन्ने कुरा मनमा आईरहन्छ ।
ट्रक ड्राइभिङ्ग गरेर सामान्य जीवन बिताईरहेका जर्जले २० डलरको नोट कहाँ पाए होलान ? कस्ले दियो भन्ने कुरा सायद उनलाई पत्तै पनि नहोला । तर सडकमा प्रहरीले दिएको यातना देख्दा लाग्छ अमेरिकामा सयौँ वर्ष देखिको दासता र दमन अझै बाँकि नै छ कि भन्ने झझल्को दिन्छ । हो, यहाँ अमेरिकामा ‘रेसिजम’ (रंग भेद) छ । म २०१५ सेप्टेम्बरमा न्युयोर्कको जेएफके एयरपोर्टमा अवतरण गरेर गन्तव्यसम्म जाने ट्याक्सी खोज्ने क्रममै मलाई ‘आर यु इन्डियन ?’ भनेर स्पेनी मूलका ट्याक्सी चालकले ‘यतिका पन्जाबी ड्राइभर छोडेर मेरो ट्याक्सीमा तिमी पक्कै चढ्दिनौं होला है ?’ भनेको कुरा बुझ्न निक्कै समय लाग्यो । किनभने त्यस बेला मलाई संसारकै सबैभन्दा शक्तिशाली र मानव अधिकार भएको देशमा जाँदैछु अनि यहाँका मानिस सभ्य, शिक्षित र सुसम्पन्न, संस्कार बोकेका होलान् भन्ने लागेको थियो । बाटाघाटा र संरचना हेर्दा पनि कति विकसित होला भन्ने मनमनै लाग्थ्यो । हुन पनि संसारका अधिकतम मान्छे अमेरिकालाई ‘ड्रिमल्यान्ड’ मान्छन् ।
नेपालमा पनि त जब मैले आफ्नो जन्मेको थात थलो छोडे अनि म कहिले पहाडिया, कहिले पाखे, कहिले काँठे त कहिले झापाली भई नै रहन्थे नी भनेर चित्त पनि बुझाउछु ।
जब म समुदायमा काम गर्न थाले अनि म आफैले पटक पटक रेसिजम भोगेकि छु । मेरै क्लाईन्टहरुले दर्जनौ पटक मलाई तँ यो देशमा किन ? जुन देशबाट आएको हो त्यहाँ नै तुरुन्त फर्केर गइहाल’ भनेका छन् । शुरुमा मलाई थाहा थिएन कसरी जवाफ फर्काउने भन्ने । मेरो आत्मविश्वास त के दिमागै खलबलिन्थ्यो । तर म अचेल “तँ पहिले जा तेरो पुर्खा र ईतिहास खोजेर अनि म जान्छु “ भनेर भनिदिन्छु । त्यति मात्र नभएर मेरो नाम थाहा नपाउने मान्छेहरुले धेरै पटक ‘इन्डियन लेडी’ भन्छन् । मलाई आफ्नो देशको साँध मिच्ने हेपाहा प्रवृत्तिको ईन्डियन भनिंदा कति पीड़ा हुन्छ मलाई नै थाहा छ । हुनत म नेपालमा पनि त जब मैले आफ्नो जन्मेको थात थलो छोडे अनि म कहिले पहाडिया, कहिले पाखे, कहिले काँठे त कहिले झापाली भई नै रहन्थे नी भनेर चित्त पनि बुझाउछु । तर म मात्रै होईन यहाँ, उनीहरु काला गोरा नै कसैले कसैको अस्तित्व स्वीकार गरेको म पाउँदिन । दिनभरमा हुने झगडाहरु मध्ये ६० प्रतिशत झगडा कालो, गोरो र चिनियाँ वा स्पेनिसकै नाममा हुन्छन् । एकले अर्कालाई पहिरन, खानपान, संस्कारलगायतका विषयमा प्रहार गरिनै रहेका हुन्छन् । कति आफैं साम्य हुन्छन् कतिपयलाई मध्यस्थता गरेर मिलाउनुपर्ने हुन्छ । अमेरिका आप्रवासीको देश हो । यहाँ काला–गोरा, एसियन, स्पानिस, धनी–गरिब, शक्त–अशक्त, मोटा–दुब्ला सबै वर्गका मानिस छन् । तर नाक थेप्चो भएकाजति सबैलाई चिनियाँ भनिन्छ । गहुँगोरो अनुहार भएका सबै इन्डियन र काला जति अफ्रिकी अनि गोरा जति सबै अमेरिकी भन्ठान्छन् उनीहरू। अरु जे भएपनि काला र गोराबीचको रंगभेदको जरा भने निक्कै गहिरो छ । गोरा जातिले आफूलाई उच्चकोटीको, पढेलेखेको र सभ्य भन्न रुचाउँछन् भने कालाहरू हेपिएको र दास बनाएको इतिहास सम्झन्छन् ।
मानिस स्वतन्त्रताको गलत उपयोग गर्न खोज्ने एउटा प्रवृत्ति छ भने अर्काे पक्ष दासता र दमनले पीडि़त भएको सम्झन्छ । यसलाई मलजल गर्ने मुख्य जिम्मेवार ब्यक्ति नै वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प हुन ।
विश्वका दुई सय हाराहारीमा स्वतन्त्र भनिएका राष्ट्रहरू आफ्नो इतिहासको कुनै न कुनै कालखण्डमा बेलायत, फ्रान्स, स्पेनलगायतका युरोपेली मुलुकका उपनिवेश थिए । अंग्रेजीको कोलोनाइजेसन (औपनिवेशीकरण)ले राजनीतिक र शासन सत्तामाथि मात्रै नियन्त्रण नगरेर तिनको भाषा, संस्कृति, रहनसहन, जीवनशैलीमा प्रभाव परेको थियो । यीनै मानिसहरु आप्रवासी बनेर बिभिन्न बहानामा अमेरिका आएका हुन् । यहाँ यो देश जवान देश भएकाले आफ्नै सँस्कार र सँस्कृति रितीरिवाज पनि छैन । कानुनतः भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता र सम्मान गरिएको छ । मानिस स्वतन्त्रताको गलत उपयोग गर्न खोज्ने एउटा प्रवृत्ति छ भने अर्काे पक्ष दासता र दमनले पीडि़त भएको सम्झन्छ । यसलाई मलजल गर्ने मुख्य जिम्मेवार ब्यक्ति नै वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प हुन । उनले गत २०१९ को जुलाई १५ का दिन कांग्रेसका चार महिलालाई लक्षित गर्दै ‘तिमीहरूलाई यो देश मन पर्दैन भने जहाँबाट आएका हौ फिर्ता जान सक्छौ, बाटो खुला छ’ भनेपछि देशविदेशमा ठूलै तहल्का मच्चिएको थियो । अर्काे कुरा उनले कुल बजेटमा फुड स्ट्याम्पका लागी भनेर खर्च छुट्याईएको एक प्रतिशत रकम पनि कटौती गर्ने भनेर बसिखाने बर्गलाई ठुलै धक्का दिएका थिए । अरु त्यस्तै रंगभेदी भाषण र ट्वीट पनि गर्ने गर्थे । जसले गर्दा मानिसहरु उनीप्रति भित्र भित्रै क्रुद्ध थिए । एक त अहिले कोभिड १९ का कारण घर बसिरहेका, अर्काे बेरोजगारी मानिसहरु जर्ज फ्लोइडको म्रत्युको एजेण्डा मार्फत रंग भेदको नारा लिएर सड़कमा उत्रिएका छन् भने अर्कातिर यहिं मौका छोपेर पारिवारिक समस्या, भनेजस्तो जीवनयापन गर्न नसकेका लागूपदार्थ सेवन गर्नेहरु र नैराश्यजस्ता अनेक समस्याहरुबाट गुज्रेका मानिसहरु प्रहरीको भ्यानमा आगजनी गर्ने, ढुंगामुडा, तोडफोड र भवन तथा मध्यरातमा संपत्ति लुटपाट गर्न लागेका छन् ।
जुलुस गर्नु, प्रदर्शन गर्नु , नाराबाजी गर्नु र आफ्ना मागहरु राख्नु जनताको अधिकार हो । अमेरिकामा रेसिजमको अन्त्य हुनै पर्छ । अहिले महामारीका बाबजुद पनि मानिसहरु सडकमा आएको देख्दा मलाई के आशा जागेको छ भने अब आईन्दा अमेरिकामा रेसिजमको पुरै अन्त्य हुनेछ र सन १९६८ मा मार्टिन लुथर किंग जुनियरको पछिको यो नै रेसिजमको जरा उखाल्ने अन्तिम लड़ाई हो । म जस्ता आप्रवासीले समेत शिर ठाडो पारेर आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाईने छ र गल्तीको सजाय कानुन बमोजिम र मानव अधिकारको विश्वब्यापी सिद्धान्तको आधारमा हुनेछ भन्ने लागेको छ ।
लेखक अमेरिकाको स्वास्थ्यकर्मीपनि हुन